Ruka Shaw Utano Nhoroondo Plus Untold Biography Facts
musha UNITED UMAMBO FOOTBALL STORI Vatambi Vanotamba Yevatambi Ruka Shaw Utano Nhoroondo Plus Untold Biography Facts
LB inopa Nyaya Yese yeGweus Back Genius iyo inozivikanwa zvikuru nezita reZita reNickname; 'Million Mamiriyoni Dollar Man'. Yedu Ruka Shaw Childhood Nhoroondo pamwe neS Untold Biography Facts inokupa zvizere nhoroondo yezviitiko zvinoshamisa kubvira paudiki hwake kusvikira zuva. Kuongorora kunosanganisira nhau yehupenyu hwake musati mazita, hupenyu hwemhuri, hukama hwehukama uye zvimwe OFF-Pfungwa zvisinganyatsozivikanwa pamusoro pake.
Hongu, munhu wose anoziva nezvekukurumidza uye kurufu rworutsoka rworuboshwe asi vashomanana vanoona bhuku redu raLuka Shaw iro rinonakidza chaizvo. Iye zvino pasina humwe hunodikanwa, ngatitangei.
Luke Shaw Utano Nhoroondo Plus Untold Biography Facts -Upenyu Hwekutanga
Luke Paul Hoare Shaw akaberekwa musi we 12th waJuly 1995 muKingston upon Thames, United Kingdom.
Anogovera zuva rake rokuzvarwa naro James Rodriguez, Brock Lesnar, Malala Yousafzai (Mupi Wekuda Mubayiro Wekukunda), Sundar Filei (CEO weGoogle), uye Bill Cosby.
Ruka akaberekerwa mai vake, Joanna Shaw uye baba, Paul Shaw. Achikura muSurrey, akaenda kuRydens Enterprise School muHersham.
Rudo rwake rweCentral FC Gianfranco Zola akanganisa kuda kwake kwebhola. Little Luke akakurira semurevereri weCentral uye akati iye pakutanga aida kutamba muLondon club. Muzvokwadi, akaedza kupinda muchikoro chavo semakore masere. Shaw akatamba paCentral's development center muGuildford, asi haana kupiwa nzvimbo yekudzidzira.
Pasinei nokuodzwa mwoyo, Ruka akanga achiri kunakidzwa nebhola. Akaramba achitsvaka kurota kwake achiri muduku. Mune 2001, akabatana naHersham uyo akazomuudza kuMolesey Juniors achida kuzvivakira kuti ave nemakwikwi ebasa guru. Muna 2003, Southampton yakamupa foni. Mushure mekutamba kwechikwata chemakore 11 (2003-2011 yeyunivhesiti), Luke akabatana neManchester United mu2014 semusikana anodhura zvikuru akatengwa nekambani. Vamwe vose, sezvavanotaura, ikozvino nhoroondo.
Luke Shaw Utano Nhoroondo Plus Untold Biography Facts -Ukama Hupenyu
Sezvenguva yekunyora, Ruka haana kuroora asi anofara neukama nemusikana wake anodiwa Shelby Billingham. Murume nomudzimai vanofara zvikuru mumwe nomumwe uye vanofarira ukama hwavo vachifara.
Luke Shaw uye Girlfriend, Shelby Billingham
Vose Ruka naShelby vakaparadzana nzira pakarepo paakabva kuMondon kuenda kuManchester. Izvi zvakaitika paakatanga hukama neusikana Anouska Santos. Rudo runowedzera kukura kubva kune simba kusimba.
Nguva ichangopfuura, kuruboshwe kumashure rwakaratidzwa kuita usiku husiku kisimusi kutenga nemumwe wake. Shaw, akapfekedza zvose muhote nemucheka wemvere kuti azvidzivirire kubva mumamiriro ekunze echando. Vose vari vanoda chaizvo kutarisa chitoro chezvishongo zvezvipo pamberi pezuva guru.
Luke Shaw anoenda kunotengesa zvigadzirwa nemusikana wake, Anouska Santos.
Asi vachitonga nenguva yavakapedza vachirova zvigaro zvekubatanidza zvikamu zvezvitoro zvezvishongo, vangave vachigadzirira zuva ravo chaiyo mune remangwana risati iri kure. Pasi apa Luke Shaw nemusikana wake Anouska Santos muUnited NationsUniceku yekudya kwemanheru.
Luke Shaw uye mudiwa wake, Anouska Santos
Luke Shaw Utano Nhoroondo Plus Untold Biography Facts -Upenyu hweMhuri
Ruka akaberekwa uye akakurira mune imwe nguva inonyatsozivikanwa pakati peboka-boka reMamboston Upon Thames United Kingdom. Izvi zvaiva pamberi pekutsvaga kwebhora raibhadharwa kune mwanakomana wavo wokutanga.
Ndiye mwana anodikamwa wevabereki vake saka saka akagamuchira rudo rukuru uye kutarisirwa kubva kumhuri yake yaanoda. Uyezve, anopawo mhuri yake kubudirira kwake. Pasi apa VaPaul Shaw, mudzimai wake anodiwa Joanna Shaw (mushure mokuona) uye vana vavo vanosanganisira Luke Shaw.
Luke Shaw Mhuri
Baba vaRuka namai ndivo vabereki vakakodzera vanogara vakamira naye mumamiriro ezvinhu ose.
Luke Shaw Utano Nhoroondo Plus Untold Biography Facts -Luke Shaw Hama Vs Mourinho
RUKA SHAW'S brother akamboramba kuenda kune rimwe re Twitter rant umo akaonekwa achibata zvisina kunaka Jose Mourinho.
Ben Shaw akanga achiita sokuti akasiyiwa akatsamwa mushure meChangamire akaisa mukoma wake kunze kwekambani iyo boka rake rakarasikirwa ne4 - 0 kuenda kuCentral.
Asati atanga kushungurudza Jose Mourinho, Ben pakutanga akazviratidza kuti anoda chikwata chacho zvakanaka, achiti: "Nhare yakanaka nhasi Utd."
Zvisinei, zvinhu zvakakurumidza kutendeuka sezvo boka rakaparidzirwa uye Shaw akadonherwa, naBen zvingangove akanyora zvinotevera pamasangano ezvehupfumi.
Benny akaora mwoyo naJose Mourinho
Ruka Shaw aigara achizviwana pakuguma kwekugamuchira Jose Mourinho kushungurudzika kwakamuita kuti aburwe kubva kumusasa wake. Jose kazhinji anotsoropodza Shaw pachena pamusana pokuti vakuru vemuUnited States vakamanikidzwa kunyaradza musikana wechidiki.
Jose Mourinho akaora mwoyo naRuka Shaw
Luke Shaw Utano Nhoroondo Plus Untold Biography Facts -Leg Break Video
Luke Shaw kamwe akambotambura kurwadziwa kusingafungidziki kwekutyisa kwemakumbo maviri mumutambo weChampions League nePVV.
Pasingapfuuri nemaminitsi 15 mumutambo, kubhadhara kwakasiyiwa kumashure kwakanga kuri kukonzera munzvimbo yekupikisa apo Hector Moreno, mutsigiri we PSV, akafungirwa mukati make.
Luke Shaw Utano Nhoroondo Plus Untold Biography Facts -unhu
Danny Rose ndiCcercer uye ane chirevo chinotevera kumunhu hwake.
Luke Shaw's Strengths: Anononoka, anonyanya kufungidzira, akavimbika, ane hanya, anonzwira tsitsi uye anonyengetedza.
Matambudziko aLuka Shaw: Moody, kusava nechokwadi, kusafungira, kunyengera uye kusachengeteka.
Zvakaita Ruka Shaw zvaanoda: Art, pamba-shanduko yekuzvivaraidza, kusununguka pedyo kana mumvura, kubatsira vanodiwa, kudya kwakanaka neshamwari.
Zvakaita Ruka Shaw asingadi: Vatorwa, chero kutsoropodza Amai nekuzarura hupenyu hwehupenyu hwega.
Luke Shaw Utano Nhoroondo Plus Untold Biography Facts -Chikonzero shure kweNickname
Zuva vakambotaura kuti vatambi veUnited vakatumidza zita rokuti Luke Shaw 'The Six Million Dollar Man'. Izvi zvinokonzerwa naiye ane kutenda kwakadaro nemudzidzi ainzi Steve Austin uyo akakuvadzwa zvakakomba apo nzvimbo yake yepasipiti yakaputsika.
Ruka zvakare akatambura kuparara kwemajaya panguva yeChampions League yakakundwa ne PSV Eindhoven.
Luke Shaw Utano Nhoroondo Plus Untold Biography Facts -Kurwisana Nenzira Inofunga
Luke Shaw akave akafananidza nemuimbova weManchester United achidzoka shure Patrice Evra zvikurukuru achitarisa kuti ndiani akatora nzira yakanyanya kurwisa-mhinduro kumutambo. Hungu, Evra akawana mukurumbira sechirwere chinopikisa MUMWE matanho anoratidza kuti Shaw ari nani.
Chokwadi chakaratidzwa Luke Shaw ndechekurwisa-pfungwa kupfuura Evra
Maererano nehuwandu, wechidiki akaita mapurisa e141 kuvadzidzi vake muChNUMX Premier League kuonekwa - kupfuura Evra akagadzirisa - uye akawana 35% kubudirira kwekuedza paakaedza kutambisa nebhora.
Luke Shaw Utano Nhoroondo Plus Untold Biography Facts -Paul Scholes Haafari
Mumwe murume Shaw haasati achinetseka kusvikira zuva rainzi Paul Scholes. Muremekedzo weManchester United ane nguva dzose hit out pamusoro pemutengo wekambani yake yekare yakabhadhara muchengeti uye akadaro Red Devils aifanira kunge asayina mubhodha panzvimbo. Scholes, uyo akaita kuti 718 zvioneke zvachose zveUnited in glittering 20-year-career, achangobva kutaurwa achitaura kuti £ 30 + mamiriyoni akachengetwa paShaw aiva "Usiri".
Paul Scholes asingabvumirwi naRuka Shaw
Mumashoko ake ..."Nokuti kuruboshwe-kuruboshwe kukwana £ xMUMX mamiriyoni kuratidza kuti zvisizvo mutambo waenda sei. Nokudaro mari, Ndinoda hurumende-iyo inofanirwa kugovera 30 zvinangwa munguva "
Luke Shaw Utano Nhoroondo Plus Untold Biography Facts -Muvengi wake wakaipisisa
Luke Shaw akauya kuzorwisana nevamwe vevanotyisa zvikuru. The likes of Eden Hazard, Daniel Sturridge uye Wilfried Zaha, Luis Suarez zvose square up.
Asi ndiani anonyanya kurwisana naye? Kwete, kwete Suarez, anozivikanwa nekurova vanopikisa. Ndizvo Victor Moses. Paakabvunzwa munguva ichangopfuura Twitter Q & A uyo uyo ainyanya kutya mutikisi aiva, nyenyeri yakapindura, zvichida zvinoshamisa:
"Icho chinorwadza asi ini ndiri kuenda Victor Moses, zvakakwana nekuda kwake uye simba. Ndaigara ndichiona kuoma kwakaoma. "
Luke Shaw Utano Nhoroondo Plus Untold Biography Facts -Vechiduku Vari Kutarisira
Pasinei nevechina yepasi-mutsiguru mukuru kupfuura vose, kutora muhomwe yePNON X -UMX-a-week, vatambi nemafanana zvakafanana havafaniri kutarisira kuona Luke Shaw achityaira motokari.
Izvi hazviiti nokuti haakwanisi kutenga - mari yake yeUn yakaita kuti ave mumwe wevechidiki vechidiki.
Kare kumashure, Yaiva nokuti haasati apfuura kuedza kwake kuyendesa. Inguva dzakadai saizvi unoyeuka kuti Shaw wechidiki akanga aripo panguva iyoyo.
Akanga ari 18 chete paakabatana United. Asati atanga kupinda, akanga achiri kurarama nevabereki vake. Vabereki vake vanowanzomutadzisa kuti adzidze uye kutamba mitambo. Izvi zvaiva kunyange asati aenda kuClomb World Cup. Shaw akatora vhiki-yakareba, hurukuro yekutyaira mushure mokunge vimbiso yake yeChina yeNdebe yeNyika yapera. Izvi zvaiva mukuedza pakupedzisira kuwana pepanesi rake. Kutendeuka kwake kubva kumurume wechidiki akapfuma kusvika kune munhu mukuru kwaiva chimwe chimwe chinhu.
Ndinokutendai nokuverenga Danny Rose's Childhood Story pamwe untold biography chokwadi. At LifeBogger, tinoedza kururamisa uye kusaruramisira. Kana ukaona chimwe chinhu chisingatarisi zvakanaka munyaya ino, chinyorwa iwe taura nesu!.
James Ward-Kujekesa Utano Nyaya Plus Untold Biography Facts
Yakagadziridzwa zuva: Gunyana 24, 2020
Ryan Bertrand Utano Nhau Plus Untold Biography Facts